Ukuphupha ngamazinyo Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha lentlungu amavili okusila
Uninzi lwethu luyabazi, kwaye sonke sibathiyile. Ukuqaqanjelwa lizinyo kwenzeka xa izinyo lonakele lisiya kwi-nerve okanye indawo yengcambu idumbile. Kwabaninzi, yeyona ntlungu inkulu inokusifikela. Iyahlaba kwaye irhawuzelele, ngamanye amaxesha izinyo alinakubekwa ndawo, ke oko kubonakala ngathi kuyenzakalisa intloko yonke.
Ukujikeleza kunye nokuba sempilweni ngokubanzi nako kuyachaphazeleka. Ngokwenyani, kufuneka siye kugqirha wamazinyo rhoqo njengesilumkiso, ukwenzela ukuba izinyo lingaveli. Kodwa abantu abaninzi bayoyika ukuya kugqirha wamazinyo kuneentlungu, de izinyo libe libi kakhulu kwaye abanandlela yimbi. Okanye bayawamkela umngcipheko wokuphulukana namazinyo kunye nokuba nomthombo onobuzaza wokudumba emzimbeni, onokuba neziphumo ezibi.
Ukuba siphupha ngamazinyo, nangona yonke into ilungile ngamazinyo ethu, ke ukutolikwa kwephupha kuyakubona uphawu lweengxaki ezahlukeneyo.
1 Isimboli sephupha "i-toothache" - ukuchazwa ngokubanzi
2 Isimboli sephupha "i-toothache" - ukuchazwa kwengqondo
3 Isimboli sephupha "Izinyo" - Ukutolikwa ngokomoya
Isimboli sephupha "i-toothache" - ukuchazwa ngokubanzi
Iphupha lokuqaqanjelwa ngamazinyo kunqabile ukuba libonise iingxaki zokwenyani zamazinyo, ukuba umntu unezinyo, musa ukuphupha ngazo.
Endaweni yoko, uphawu lwephupha lunalo ingxaki kubomi bamaphupha. Njengomngxunya kwizinyo lakhe, kufanele ukuba ayiqhawule ngokukhawuleza kunokuba ayityhale phambi kwakhe. Uphawu lwephupha lukucela ukuba unganikezeli kwaye ungavumeli iingxaki zikwehle. Ngokuqinisekileyo kungekudala izakucaca into ecinezela ukulala okanye ukukhathaza ngengqondo. Ke ngoko, ukuqaqanjelwa lizinyo ephupheni kunokubonisa ukuba umsindo okanye usizi oziva ngalo kungoku nje luza kujika lube luvuyo.
Kwakhona, uphawu lwephupha lumele ukubonisa iindaba ezimbi. Iphupha liya kufumana iindaba ezingathandekiyo, kodwa ngaphandle iziphumo ezibi hlala. Kungekudala uya kuphinda wonwabe.
Umfanekiso ofana nephupha lokuqaqanjelwa lizinyo unokubhekisa kwiingxaki zomntu. Yiyo loo nto ebhengeza izithuko okanye izithuko kwabanye. Iphupha liya kuphila kule nto kwaye kungekudala uza kukwazi ukuyihleka. Ngamanye amaxesha kunokuba njalo iingxaki zemali zifanekiselwa lizinyo: inkcitho engalindelwanga ivula umngxuma omkhulu kwirejista yemali.
Isimboli sephupha "i-toothache" - ukuchazwa kwengqondo
Kwingcaciso yengqondo yephupha, iphupha lokuqaqanjelwa ngamazinyo lihlala litolikwa ngendlela yokuba iphupha libe nemvakalelo yokuba liza kuthi.ndaziva ezinyo «Oko kukuthi, indlela abaziphatha ngayo okanye ubuntu babo bujongwa ngononophelo. Uyayiqonda impazamo okanye woyika nje ukuba wenze impazamo malunga nento ethile. Ukuqaqanjelwa lizinyo kubonisa imvakalelo yokungonwabi yokuba wenze impazamo. Unokuziva unetyala Ukuzisola ngqangcangcang
Ukuqaqanjelwa ngamazinyo okurhwaphilizelayo kunye nokugubungela isithunzi kunokuba ngumqondiso wephupha Ububi bothando ukuba. Ukuphupha kunengxaki yokwahlukana okanye ukurhoxa kuthando kunye neenkqubo zentlungu kulo mfanekiso.
Isimboli sephupha "Izinyo" - Ukutolikwa ngokomoya
Ukutolikwa ngokwasemoyeni, izinyo elimele amazinyo limele ubunzima bokukhula ngokomoya ekufuneka iphupha lijongane nalo. Endaweni yokuba madolw 'anzima ukucinga ngeengxaki zakho, kuya kufuneka uziqwalasele. Umngeni qaphela kwinkqubo yokuvuthwa.